Kubulawe umbhishobhi nenkosikazi yakhe - Ilanga News
Home Izindaba Kubulawe umbhishobhi nenkosikazi yakhe
Kubulawe umbhishobhi nenkosikazi yakhe
Izigilamkhuba zibaleke ngemoto yabafi
KWAKUKUHLE kudelile enkonzweni eyandulela umshado kamBhishobhi Mphikeleli Mngoma nowakwakhe uNkk uBalungile Mngoma, bobabili abadutshulwe babulawa emzini wabo.
UHLAFUNA ujeqeza umndeni wombhishobhi weZayoni eMzinyathi, eNdwedwe, emuva kwesigameko esinyantiza igazi sokudutshulwa kwakhe nomkakhe phambi kwezingane ngoLwesine. Silobe izolo ngeSonto ingakaziwa imbangela yokudutshulwa kubulawe umBhishobhi Mphikelelwa Mngoma (74) we-Ekuphileni Apostolic Church In Zion nomkakhe, uNkk Balungile Mngoma (41). Kuthiwa ababulali baqede ukubulala abafi, bathatha imoto kambhishobhi, egcine itholakala eMaoti ngakhona eMzinyathi ngalo usuku lwesigameko.
Indodana yabafi, uMnu Xololuhle Sithole (21), ithi namanje isathuka uma icabanga ngento eyenzeke kubazali bayo. “Bengihleli egunjini lami lokulala ngimatasatasa nomakhalekhukhwini wami ngesikhathi ngizwa kukhona into eqhumayo. Kangibanga nankina ngoba bengizitshela ukuthi ngumfowethu omncane uyaganga. Iphinde yaqhuma okwesibili, ngaphuma ngayobheka endlini enkulu.
“Ngithe ngisondela ekhishini, ngazithela kumama elele phansi egcwele igazi. Kuthe uma ngizama ukusondela, wangixosha ngoba ubesaphila wathi mangibaleke kakhulu.
“Ngizamile ukuqinisa ikhanda ngizama ukusondela kuyena kodwa ngezwa izwi lomuntu wesilisa engingalazi likhuluma ekamelweni, ngabaleka. Ngithe ngisanda kusuka nje kuyena umama, saqhuma futhi isibhamu. Omunye wabasolwa uphume waya egunjini lami lokulala, kodwa wajika endleleni waphindela endlini enkulu. “Kudlule isikhashana ngezwa imoto yasekhaya iduma, okuthe uma ngilunguza ngayibona iphuma, bangena kuyona bahamba. “Ngiphindele ekhaya ngafica umama eseguqukile, ikhanda lakhe selivele emnyango esethule, ngidlulele ekamelweni ngafika ubaba naye esethule, ngaphuthuma emaphoyiseni,” kusho yena. Uthi akazi ukuthi bebenzeni abazali bakhe ngoba kabakaze basho ukuthi kukhona abaxabene naye.Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal uCol Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala lokubulala, bekungakaboshwa muntu.
Previous articleIsizwe sethulelwe inkosi yaso
Next articleIntukuthelo kugugulwa amathuna awu-11